SomaliTalk.com » Axmadu Oulad Cabdalla oo lagu Cadaadinayo in uu ka tago shaqada Ergeynimo ee Soomaaliya
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Tuesday, May 11, 2010 // Jawaabaha waa la xiray
Axmadu Oulad Cabdalla oo ah Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxaa soo baxayey ama soo gaarayey maalmahan Dhaliilo kaga imaanayey qaar ka mid ah Beesha Caalamka iyo Xubno ka tirsan Dowlada Federaalka ka dib markii uu ku guuldareystey in uu wax ka qabto xaaladda soomaaliya oo marba marka ka dambeysa ay sii xumaaneyso islamarkaana Dagaalada ka sii socd soomaaliya ay ku dhimanayaan dad raiyid oo aan waxba galabsan
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay oo muddo hada laga joogo 3 sano laga dhigay wakiilka Qaramada Midoobay Soomaaliya ayaa wararka qaar sheegayaan maalmaha soo socda uu gaari doono Magaalada Newyork ee Dalka Mareykanka si wax looga weydiiyo xaaladda soomaaliya oo haatan mareysa meeshii ugu xumeyd iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo in la bedelo ergeygaas waxaana soo dedejinaya in laga eryo shaqada markii 3 dii sano ee tagtay soomaaliya ay ku dhinteen dad ku dhow 22,000.kun oo qof.
Cadaadiska ugu badan waxaa uu kaga imaanayey Xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu sheegey in uu wax ka qaban waayey murankii u dhaxeeyey Gudoonka Sare ee Baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka ka dib markii xildhibaanadaas ay sheegeen in uu dhamaadey waqtigii Sheikh aadan Madoobe.
Mudane Mawliid Macane oo ka tirsan baarlamaanka KMG ayaa ku eedeeyay Mr. Cabdalla inuu isagu ka dambeeyo khilaafka hada ka dhex jira mudanayaasha iyo gudoonka baarlamaanka.
Kuwa ka soo horjeedo siyaasada Axmadu Oulad Cabdalla ayaa sheegaya in uu Mr. Cabdalla sabab u ahaa mucaaradada hubaysan ee hada ka jirta Soomaaliya maadaama uu ka doortay koox ka mid ahayd kuwii la dagaalamayay dowladii Cabdullahi Yussuf.
Sidoo kale Mr. Cabdalla ayaa lagu tilmaamay mid aanan xiriir la sameeynin kooxaha mucaaradka ah balse uu taageeradiisa ku koobay dowladda KMG oo ah mid aad u taag daran.
Mudadii dagaalada ka jireen soomaaliya waxaa soo marey dhowr ergey oo ay soo magacawdey Qaramada Midoobey dhamaantood waxay noqdeen kuwo aan waxba ka qaban Xaaladda soomaaliya waxaana sii xumaanayey arrinta soomaaliya oo haatan gashey mar xaladii ugu xumeyd.
Xoghayahii Guud ee Qarammada Midoobay (January 1, 1982 – January 1, 1992) Javier Pérez de Cuéllar, oo u dhashay dalka Peru, ayaa Decmber 1991 waxa uu Soomaaliya u diray wafti xaqiiqo raadis ah si ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirtay Soomaaliya. Waftigaas waxaa hoggaaminayey James O.C. Jonah, oo u dhashay dalka Sierra Leone. Waftigaasi waxay soo diyaariyeen warbixin ay aad uga dayriyeen xaaladda Soomaaliya. Warbixintaas ayaa la tilmaamaa in ay sabab u ahayd in Qarammada Midoobay ay Ergey ama wakiil gaar ah u magacawdo Soomaaliya.
Xoghayahii Guud ee Qarammada Midoobay (1 January 1992 – 1 January 1997) Boutros Boutros-Ghali, oo u dhashay dalka Masar, ayaa April 28, 1992 waxa uu Wakiilkiisa Gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Maxamed Sahnoun, oo u dhashay dalka Algeria. Waa xilligii UNOSOM I (April 1992 – March 1993). Laakiin October 26, 1992 ayaa Sahnoun iska casilay xilkaas kaddib, sida la sheegay, markii khilaaf soo kala dhex-galay isaga xoghayaha guud QM.
Markaas ayaa waxaa Xoghayaha Guud ee QM waxa uu November 8, 1992 Ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Ismat T. Kittani oo reer Ciraaq ah. Ismat Kittani waxa uu ahaa ergeyga gaarka ilaa March 1993 markaas oo ay bilaabatay UNOSOM II (March 1993 – March 1995) iyo xilligii hawlgalkii UNITAF ee “raja soo celinta Soomaaliya” (December 5, 1992 ilaa May 4, 1993).
Waxaa markaas (February 1994) Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya si kumeel gaar ah u sii qabtay kuxigeenkii oo ahaa Lansana Kouyaté, oo dhashay dalka Guinea.
Sidaas daraadeed waxaa April 15, 1995 ay Qarammada Midoobay xafiis qaabilsan arrimaha Soomaaliya ka furtay Nairobi, xafiiskaas oo loo bixiyay United Nations Political Office for Somalia (UNPOS). Qarammada Midoobay waxay sheegtay in xafiiskaasi loogu talo galay “Horumarinta nabadda iyo dib-u-heshiisiinta ayadoo lala kulmayo hoggaamiyaasha Soomaalida, ururada bulshada iyo dalalka iyo ururada danaynaya.”
Waxaa xafiiskaas UNPOS madax ka ah Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, kaas oo si dhaw ula socda xaaladda gudaha Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira Soomaaliya. Ergeyga Khaaska ah waxa uu Xoghayaha Guud ee QM u gudbiyaa warbixinno waqtiyo ah oo kooban, waxa kale oo uu warbixino u gudbiyaa Golaha Ammaanka ee QM. Xafiiska Soomaaliya u qaabilsan QM (UNPOS) waxa uu bixiyaa hagid siyaasadeed markii loo baahdo, oo uu siinayo rugaha Qarammada Midoobay iyo hay’adaha UN-ta ee maaraynaya mucaawinada bini’aadamino iyo ururada UN-ta ee dalka Soomaaliya, sidaas waxaa qortay shabaka xafiiskaas ee Nairobi.
Xoghayahii Guud ee QM (1 January 1997 – 1 January 2007) Kofi Atta Annan, oo u dhashay dalka Ghana, ayaa February 25, 2002 waxa uu Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Winston A. Tubman oo u dhashay Liberia. Waxana uu xilkaas hayey ilaa April 2005.
Kofi Annan waxa markaas kaddib ergeygiisa khaaska ah ee Soomaaliya uu May 3, 2005 u magacaabay François Lonseny Fall, oo u dhashay dalka Guinea, waxa uu xilkaas hayey ilaa September 2007. (Waxay ku beegan tahay xilligii ciidamada Itoobiya ay galeen Muqdisho December 28, 2006 ilaa Janauary 15, 2009).
Tarjumadii: SomaliTalk.com: http://www.somalitalk.com/2009/may/13/badda108.html